Ziyini izifanekiselo futhi bangawenza kanjani umsebenzi wakho kangcono? Kusuka kuLinux
Ziyini izifanekiselo futhi bangawenza kanjani umsebenzi wakho kangcono?
Ingabe kuzwakala kujwayelekile? Wake walifunda lelo gama futhi ungasakhumbuli ukuthi lalikhuluma ngani? Yebo, ungakhathazeki, kukhona abambalwa abazi futhi basebenzise leli thuba elihle uNautilus asinika lona khomba kalula amafolda namafayela ngaphandle kokuchitha amahora sikhungathekisa ukwakheka kwethu kwefayili okuxubile ngaphandle kokuthola lutho.
1 Siyini isibonakaliso futhi senzelwe ini?
2 Ungabeka kanjani isibonakaliso kufayela noma kufolda
3 Uzakha kanjani izifanekiselo ezintsha
Siyini isibonakaliso futhi senzelwe ini?
Uma une-verbose engaphezulu noma encane, mhlawumbe unawo wonke amadokhumenti akho namafayela ahlelwe kumafolda. Vele, njengoba uqoqa amafayela, ungeza amafolda. Lokhu kwenza ukwakheka kwefayela lakho kube yinkimbinkimbi ngokwengeziwe, kwesinye isikhathi kuze kube seqophelweni lokungakwazi ukuthola lutho ngokushesha.
Ungacabanga ngezifanekiselo njenge amamaki ongawabeka kumafolda akho ukuze uwabone kalula. Ngakho-ke, ngokwesibonelo, ungabeka uphawu olukhethekile kufolda lapho ugcina khona umculo wakho, olunye uphawu kwifolda lapho ugcina khona imibhalo yakho siqu, enye kufolda yezithombe, njalonjalo.
Ake sibone isibonelo:
Njengoba ukwazi ukubona, lokhu akukususi isithonjana sefolda kepha kukuvumela ukuthi ubeke isithombe esincane ohlangothini olungakwesokudla ukuze usibone ngaphandle kokufunda nokucacisa ukuthi kuyini. Kufundwa ngokunembile lokho siqaphela isithombe ngokushesha okukhulu kunalokho okusithatha ukuthi sikufunde, kulokhu, igama lefolda; ingasaphathwa eyokuthi, okubi kakhulu, ifolda esiyifunayo kungenzeka itholakale phakathi kwezinkulungwane zamanye amafolda ngakho-ke kuzodingeka sidlule kwamanye amaningi ngaphambi kokuthola ifolda yethu engabambeki.
Kulungile manje lezi zifanekiselo zingasetshenziswa noma yiliphi ifayela. Lokho wukuthi, akuyona into ekhethekile kumafolda. Lapha ukusetshenziswa kuyafana. Isibonelo, esimweni sokuthwebula kwangaphambilini, ngafaka uphawu ngewashi elincane ku- slow usb.txt. Ngaleyo ndlela, ngizikhumbuza ukuthi kufanele ngisebenze ngokuqukethwe kwalelo fayela kungekudala. Ngamafuphi, ngayinye inawo "amakhodi" ayo.
Ungabeka kanjani isibonakaliso kufayela noma kufolda
Ngivule iNautilus ngenza okulandelayo:
Khetha into ofuna ukwengeza uphawu kuyo.
Qhafaza kwesokudla kufayela / kufolda, bese ukhetha Ama-propiedades. Ngemuva kwalokho kuzokhonjiswa iwindi lezinto zento leyo.
Chofoza ku-flap Izifanekiselo ukubonisa isigaba sethebhu seZifanekiselo.
Khetha isibonakaliso ongangeza kuso.
Cindezela vala ukuvala ibhokisi lezakhiwo.
Uzakha kanjani izifanekiselo ezintsha
Ngikhethile Hlela> Izendlalelo Nezifanekiselo.
Cindezela inkinobho Isibonakaliso, bese uchofoza inkinobho Faka uphawu olusha. Iwindi lengxoxo lizovela.
Thayipha igama lesibonakaliso ebhokisini lombhalo Igama elingukhiye. Cindezela inkinobho Imagen.
Iwindi lezingxoxo lizovela, chofoza Hlola. Uma ukhetha uphawu lwakho, cindezela ukwamukela.
Cindezela ukwamukela ukudala uphawu lwakho olusha.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-UseLinux yeFayileLet » Ziyini izifanekiselo futhi bangawenza kanjani umsebenzi wakho kangcono?
AmaSudacas awakwazi ukukhuluma iSpanishi, okwakho kunalokho kukhuluma ngemicibisholo yamaNdiya nokudubula
NgingumSpanish, futhi hhayi ukusho ukuthi ngicabangani ngawe, ngizomane ngithi uyihlazo ELIKHULU lomuntu, hhayi njengeSpanish nje (uma u…)
Umbhali ungifundise okuthile ebengifuna ukwazi ngakho, noma ngabe ngikuthola kuwusizo yini noma cha.
Uyazichaza ngezimfundiso zakho zokucebisa. Usetshenziswa kakhulu futhi usiza sonke isintu… Kufanele uziqhenye ngobuchopho bakho obukhulu nokuhlakanipha kwakho: Bengingalindele ukuthola okuningi ekhasini elikhuluma ngezifanekiselo… Ngiyabonga, Parodri93.
Ngingazifaka kanjani izifanekiselo ku-thunar? noma ngesandla?
Qhafaza kwesokudla kufayela noma kufolda okukhulunywa ngayo ukuletha imenyu yokuqukethwe bese ukhetha "izakhiwo." Ewindini elivelayo, khetha ithebhu ethi "Izifanekiselo".
I-Faenza: iphakethe lesithonjana elimangalisayo ledeskithophu yakho
Isisebenzi: unakekele impilo yakho lapho usebenzisa ikhompyutha